इँटा उद्योगबाट सयौँलाई रोजगारी - Purbeli News
सोमबार, जेठ १४, २०७५
इँटा उद्योगबाट सयौँलाई रोजगारी
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण ०१, २०७४ समय: १६:०८:१०
पाल्पा /रामपुरमा इँटा उद्योग सञ्चालनमा आएपछि सयौँ बेरोजगार युवालाई रोजगार मिलेको छ । रामपुरका स्थानीय युवा सीताराम देवकोटा र सुन्दर देवकोटाले सञ्चालन गर्नुभएको इँटा उद्योगमा हाल १०० भन्दा बढी मजदुरलाई रोजीरोटी गर्ने अवसर मिलेको छ । इँटा उद्योगमा मजदुरी गरेर परिवारको लालनपालनसँगै छोराछोरीको पढाइ खर्चका लागि सहज भएको कामदार किशोरी बैठ्ठा बताउनुहुन्छ । रौतहटबाट रोजगारका निम्ति यहाँ आउनुभएको उहाँले इँटा उद्योगमा मजदुरी गरेर मासिक रु ३० हजारभन्दा बढी कमाइ गर्नुहुन्छ ।
यहाँ काम गर्ने सबैजसो कामदार तराई क्षेत्रका छन् । रौतहटकै अर्का मजदुर दिनेश रावत कुर्मीले इँटा उद्योगमा मजदुरी गरेर मासिक रु ४० हजारसम्म आम्दानी गर्नुहुन्छ । इँटा उद्योगमा मजदुरी गरेर उहाँले ११ जनाको परिवारको गुजारा चलाउँदै आउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विदेश गएर कमाउने पैसा नेपालमै कमाउन सकिन्छ, दाम कमाउनकै निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वी पाल्पामै एकमात्र आधिकारिक रुपमा सञ्चालित उक्त इँटा उद्योगबाट बेरोजगार युवालाई पर्याप्त आम्दानी गर्ने अवसर मिलेको छ । पाँच वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा आएको सो उद्योगमा रु डेढ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको सञ्चालक सुन्दर देवकोटा बताउनुुहुन्छ । यहाँ दैनिक ४० हजारको हाराहारीमा इँटा उत्पादन हुने गरेको छ । प्रतिइँटाको मूल्य १४ रुपैयाँ ५० पैसा पर्छ ।
काम र परिश्रमअनुसार मजदुरलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको बताउनुुहुन्छ अर्का सञ्चालक सीताराम देवकोटा । यहाँ उत्पादित इँटा गुणस्तर र टिकाउ रहेकाले माग दिनानुदिन बढ्दो रहेको उहाँले बताउनुभयो । उद्योगमा काम गर्ने सबैजसो मजदुरले घरायसी खर्च र छोराछोरीको पढाइ खर्च राम्रोसँग चलाउँदै आएका छन् । सो उद्योगमा उत्पादित इँटा पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपरासीलगायत जिल्लामा खपत हुन्छ ।
३० खर्बको अर्थतन्त्र, १६ खर्बको बजेट
पाँचथरमा १६ सीमा स्तम्भ हराए
दलित बिवाह गरेकै कारण यस्तो अपमान : काजकिरिया गरिदिने ब्राहमणलाई सम्मान
उपत्यकामा रगत अभाव
अन्तत् ३८ क्विन्टल सुनकाण्डमा गोरे जेल चलान : के छ गोरेको बयानमा ?
नक्कली छोरा बनाएर मिर्गौला तस्करी !
सुन तस्करी र हत्या मुद्दा : ‘ठूला नेता पक्रिए पर्दाफास’
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ ज्येष्ठ १४ गते सोमबार
कक्षा ३ मा अध्यनरत छात्रालाइ शिक्षकद्वारा अगाडीघोप्टो पारेर लाल्ताले हानेपछी, अस्पताल लगेपछी खुल्याे यस्ताे रहस्य